हरेक पुरुषले एक पटक पढ्नै पर्ने ! - Nawalpur Dainik
– हालैको शोधअनुसार शु ‘क्रकी’ टलाई सन क्रिम र कमेस्टिकले व्यापक कुप्रभाव पार्छन् । हुन त यस कुरालाई केही वैज्ञानिकहरुले अस्वीकार गरिसकेका छन् । – नेदरल्यान्डका एक जना माइक्रोस्कोप बनाउने व्यक्तिले पहिलो पटक स्पर्मको खोजी गरेका थिए । उनले के पत्ता लगाउन शुक्रकीट खोजेको भन्ने अहिलेसम्म पत्तो लागेको छैन । – औसत वी’ र्यमा शु ‘क्र’की’ टको संख्या ३० लाख हुन्छ । – सामान्य रुपमा पुरुषले एक सेकेन्डमा १५०० शु’ क्रकी’ टका कोष उत्पादन गर्ने गर्छ
Prevघरमा यी ६ चिज राख्नले मिल्दैन लक्ष्मी माताको साथ !!
Nextजेठ ०७ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल